यसकारण पनि आवश्यक छ नियमित सेक्स, नत्र यि समस्या भोग्नुपर्नेछ onlinedarpan.com
Wednesday 27th of October 2021 / 01:00:47 PM
यसकारण पनि आवश्यक छ नियमित सेक्स, नत्र यि समस्या भोग्नुपर्नेछ
दैनिक जीवनमा अन्य चीजको जरुरत भए जस्तै सेक्सको पनि मानिसलाई जरुरत हुन्छ । खास गरेर हाम्रो समाजमा अझैपनि यसको बारेमा खुलेर कुरा गर्न हिच्काचाउँछन् । तर स्वस्थ रहनको लागि यो पनि अनिवार्य छ ।
नियमित सम्बन्ध बनाउनाले शरिरलाई धेरै किसिमका फाईदाहरु हुन्छन् । यदि तपाई सम्बन्ध बनाउन छोड्नु हुन्छ भने तपाईको शरिरमा अनेक किसिमका नराम्रा असरहरु पर्न सक्छन् । बिभिन्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् ।
नियमित सेक्स नगर्दा उत्पन्न हुने ६ समस्याहरु:
१.रोगहरुसँग लड्ने शरीरको क्षमतामा असर
२. मुटु रोग हुनबाट बचाउँछ
३.चिन्ता बढ्ने खतरा
चिन्ता तथा तनाव कम गर्नमा यौन सम्पर्कले राम्रै भुमिका निभाउँछ । बढी चिन्ताबाट ब्लड प्रेसर बढी हुन्छ र समस्या सिर्जना हुन्छ ।
४. पुरुषमा इरेकटाइल डिस्फंकसनको खतरा
जसले नियमित रुपमा शारिरीक सम्बन्ध गर्छ उनमा इरेक्टाइल डिस्फंक्सनको खतरा यौन सम्बन्ध नबनाउनेको तुलनामा कम हुन्छ । यौन सम्बन्धले यसलाई परहेज गर्छ । नियमित यौन सम्पर्कले पुरुषको लिंगमा सकारात्मक असर पर्छ ।
५. वजाइना योनीमा दुखाई
यदि तपाई यो सोचेर यौन सम्बन्ध बनाउन हुन्न कि वजाइना (योनी) टाइट हुनेछ भनेर तर, त्यो गलत हो । कडापनको महसुसको तपाईको यौनसम्बन्धमा कुनै सम्बन्ध छैन् ।
६.यौन इच्छामा नराम्रो असर
विज्ञहरुको भनाई अनुसार नियमित यौन सम्बन्ध बनाउनाले यौन इच्छा बलियो हुन्छ । उनको भनाई अनुसार यदि तपाई यसलाई अस्वीकार गर्न हुन्छ भने सेक्स गर्ने रुचि पनि कम हुन जान्छ र शक्तिमा पनि कमी आउँछ । एजेन्सीको सहयोगमा